သာလွန်ဇောင်းထက်| October 26, 2012 | Hits:7,851
| | ရခိုင်ပြည်နယ် ကျော်တော်ဒေသမှ ဒဏ်ရာရရှိလာသူများကို အောက်တိုဘာ၂၆ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
RNDP နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြိုပြင်မည်မြောက်ပိုင်း ABSDF တွင် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရမှု မိခင်ဖြစ်သူက အမှုဖွင့်ဝန်ကြီးပိုင်သရက်ခြံ မီးရှို့မှုဖြင့် ဖမ်းထားသည့် ရွာသားများ ပြန်လွှတ်ရေး တောင်းဆိုလယ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွှတ်ရေး လက်ပံတောင်း ဒေသခံများ တောင်းဆိုထောင်ကြွေးကျန် ကျခံစေခြင်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုဟု ဆို နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> snow October 26, 2012 - 8:33 pm	အမျိုးသားရေးကာကွယ်ပေးပါ။
Reply	mountain October 27, 2012 - 3:12 pm	Killing of Burma army in Arakan state almost7arakanese died was devious condition that will be made to be broken unity. Burma army always open fire non- armed ethnic people that is noticed to betray on ethnic minority.It was worsen and enhanced to riot. There are many different on concept of this chaos as Burmese and Arakanese that Burma never try this problem basically because of they didn’t like arakan scenario.I wouldn’t like to military rule that will increase to disgust and corrupt in state where Military has only responsibility to be secure and not to be conflict again.Government was weaken to use diplomacy and failed by conspiracy and knockout of OIC and them its result got burning .”" struggle of arakan state is not to frustrate””.